Iran: ex-mpiambina revolisionera mirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena mampiasa aterineto kely · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2009 20:16 GMT
Kandidà efatra no neken'ny Filan-kevitry ny mpiambina tamin'ny alarobia ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 12 jona ho avy izao.
Ireo efatra farany voafantina avy amin'ireo an-jatony nirotsaka hifaninana moa dia ny filoha mitondra amin'izao fotoana izao Mahmoud Ahmadinejad, ny praiminisitra teo aloha Mir-Hossein Mousavi, ny mpitondra tenin'ny antenimiera teo aloha Mehdi Karroubi ary ny lehiben'ny Mpiambina Revolisionera teo aloha, Mohsen Rezai.
Vao tsy ela moa i Mohsen Rezai no nitsikera ny politikan'i Ahmadinjead ary nitenenany fa manokatra ny fiara-midinika amin'i Etazonia izy. Efa nokianiny ihany koa ny tsy nahazoan'ny fitondram-panjakana Iraniana ny vidin-tsolika mitentina $1 miliara, ary manolotena izy hanao izay hahazoana ny vola rehefa voafidy.
Namoaka ny lahatsary ahitana ny kabarin'i Rezai mamaly ny vitsy an'isa Sonita ao amin'ny goverenmanta Iraniana i Digital Kalashinkof, mpamaham-bolongana Iraniana sady mpanao gazety. Nolazain'i Rezai ary fa “manohitra ny andrim-panavakavahana rehetra izyary hifampizara andraikitra amin'izy ireo.” Tsy misy minisitra Sonita moa amin'izao fotoana izao ao amin'ny governemanta Iraniana.
Mampiasa ny atrineto i Mohsen Rezai sy ny mpanohana azy hampivoatra ny fampielezan-keviny, saingy maivana ihany ny teti-panorona niomerikany mitaha amin'ireo telo hafa mifaninana aminy, ary tsy dia maro loatra ny mpamaham-bolongana mpanohana.
Mizara sokajy telo ny bolongan'ny mpanohana an'i Reazi ao amin'ny vohikalany manokana:
1- Bolongana miompana amin'ny adin'i Iran sy Iraq: vondrom-bolongana te-hahatsiaro sy hanome voninahitra ireo Iraniana niady nandritra ny adiny tamin'i Iraq nandritra ny taom-polo 1980 ireo. Ao amin'ny vohikalan'i Rezai dia nosokajiana ho eo ambanin'ny anarana hoe ‘Fiarovana Masina’ izy ireo. Iray amin'ireo bolongana ireo i Nasleh Hamseh. Nolazain'io [fa] mpamaham-bolongana io momba an'i Rezai fa ny finoany sy ny hajany no tena loharanon-keriny. Tiany ampiasaina hampandrosoana ny firenena izany.
2-Bolongan'ny eo an-toerana: Nangonin'i Rezai ho eo ambanin'ny anarana hoe mponin'i Zagros (tangoron-tendrombohitra) ireo bolonagana ireo. Mazava fa notovozina avy amin'ny fokom-piavian'i Rezai io. Farzande Zagros ( Midika hoe zanak'i Zagros) no manoratra [fa] momba ny kabarin'i Rezai mampiseho ny fikasany hanangana governemanta iaraha-miasa amin'ny filoha Iraniana teo aloha to an'i Khatami sy Rafsanjani.
3-Vondrom-bolongana mifangaro: ny vondrom-bolongana fahatelo kosa dia napetrany teo ambanin'ny lohateny hoe “bolongan'ny mpanohana” ao amin'ny vohikalan'i Rezai. Maro amin'izy ireo no natsangana mba hanasongadina ny fampielezan-kevitra fotsiny. Ao no ahitan-tsika ny bolongan'ny mpanohana iray tanàna tahaka an'i Mpanohana an'i Rezai eto Isfahan na Zanaky ny Firenena.
Maivana ny fampielzan-kevitra an-tseraseran'i Rezai raha ampitahaina amin'ireo an'ny telo hafa. Tsikaritra fa mailaka noho ny lehiben'ny Mpiambina Revolisionera teo aloha ny kandidà hafa mampiasa ny fitaovana niomerika sy ny herin'ny aterineto.